Ny HTC Bolt dia hantsoina hoe HTC 10 Evo | Vaovao momba ny gadget
Ny HTC Bolt dia hatao hoe HTC 10 Evo
Efa niresaka nandritra ny herinandro maromaro momba ny terminal manaraka izay hatombok'ilay orinasa Taiwanese HTC eny an-tsena isika, terminal eo afovoany ambony izay te-hametraka ny lohany eo amin'ny tsena. Amin'izao fotoana izao ity terminal ity dia manana anarana maro HTC Bolt na HTC Acadia, anarana izay toa tsy famaritana an'io fitaovana io rehefa mahatratra ny tsena. Araka ny filazan'i @evleaks, tsy misy amin'ireo anarana ireo no ho tonga eny amin'ny tsena ny terminal satria ny anarana nofidian'ny HTC dia HTC 10 Evo, izay hahatratrarany an'izao tontolo izao. Miaraka amin'ity anarana ity, te hampiseho fitoviana iray amin'ny sainam-by, ny HTC 10, ny orinasa monina any Taiwan.
Azoko antoka fa maro aminareo no hahalala an'io anarana io. 6 taona lasa izay, HTC dia nanangana terminal, ny HTC Evo, ka ny hevitr'ilay orinasa dia fandefasana indray io elanelam-potoana io izay tena nahomby tamin'ny orinasa tamin'izany fotoana izany, izay tsy nahafa-po ny tontolon'ny telefaona toy ny amin'izao fotoana izao miaraka amin'ireo marika sinoa marobe mamoaka fantsona eny an-tsena amin'ny vidiny tery tokoa ary izany dia lasa olana lehibe amin'ireo orinasa tranainy indrindra eo amin'ny tsena.
Ity terminal ity no ho tonga voalohany amin'ny tsenan'ny orinasa Taiwanese tsy misy fifandraisana an-telefaona, fanjavonana lasa lamaody eny an-tsena ary nanomboka tamin'ny Motorola izany. Ao anatin'ny terminal no ahitantsika ny processeur Qualcomm Snapdragon 810, tantanan'ny RAM 3 GB sy fitehirizana 64 GB, fitehirizana izay ahafahantsika manitatra amin'ny alàlan'ny karatra microSD. Ankoatr'izay, izy io koa no ho terminal voalohany an'ny orinasa hahatratra ny tsena amin'ny Android 7.0 Nougat, kinova namboarina miaraka amin'ny sosona HTC Sense tena tsara.
Amin'izao fotoana izao Tsy fantatray ny daty fandefasana na ny vidin'ity terminal ity, fa ny fahafantarana ny orinasa, azo inoana fa ny terminal dia tsy hihoatra ny 500 euro, raha raisinay ny vidiny mihetsika ankehitriny eo amin'ny tsena.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Ny HTC Bolt dia hatao hoe HTC 10 Evo
Ity ny fanafihana DDoS izay nisy fiatraikany tamin'ny PlayStation Network, Twitter, PayPal ...
Ny Google Pixel maharitra 30 minitra rendrika tsy misy olana